yakakwirira frequency induction kutengesa mhangura tubing kumatare mavharuvhu
Muedzo: Induction Kuchengetedza mhangura tubing kumagetsi emhangura
Zvinhu: Mhangura uye mapaipi endarira
Zvishandiso: DW-HF-25kw induction yekudziya muchina
tembiricha: 932oF (mazana mashanuoC)
Time: 20 masekondi
Coil: Yakabatanidzwa yakagadzirirwa-yakagadzirwa coil.
Ichi chikumbiro chekushandisa chakaunzwa kuHLQ Induction Heating Power kuti itariswe nekambani yeHVAC. Chinangwa chavo chaive chekubvisa kushandisa kwavo nzira yethangi, pamwe nekubvisa hurema uye kunatsiridza kuchengetedzwa kwevanoshanda. Kutanga bvunzo, mainjiniya edu okushandisa akaunganidza kuseta kwetubhubhu tubhu uye mavharuvhu endarira. Mushure mekuisa flux kune yega yega injinjini yekudziya kwadzo kwemasekondi makumi maviri. Solder yakaiswa pamurume mushure mekunge majoini asvika 20oF (mazana mashanuo C), uye yakagadzira kunyange yakatengesa zvakapoteredza majoini. Iko kushandiswa kwe induction kudziisa kwakabudirira mune ino HVAC application.
Categories Technologies Tags induction mhangura kutengesa, induction soldering, induction soldering ndarira, induction soldering mhangura, induction soldering machine, soldering, soldering mhangura tube, kutengesa mhangura toni, kugadzira mhangura yetubhubhu kune ndarira Post navigation